Jụọ kpochapụwo Minesweeper na 'MineX' na Mac gị Esi m mac
Gwuo egwu egwu ndi ozo dika 'MineX' na Mac
Jesus Arjona Montalvo | | Egwuregwu, Mac App Store
Ugbu a, i nwere ike kpọọ kpochapụwo Minesweeper na gị Mac na 'MineX - Ngwunye Minesweeper', nke bu enwere n'efu maka obere oge na Mac App Store. Egwuregwu a na-akwụkarị ọnụ 0,99 €, na dị ka mgbe niile anyị amaghị ogologo oge ọ ga-abụ n'efu na Mac App Store.
El Minesweeper bụ egwuregwu mgbagha ebe a na-ezo ihe ndị a na-egwu n'ime oghere. Ebumnobi bụ mepee igbe niile na obere oge ka o kwere omume n’enweghị bọmbụImepe tile na-eme ka ị mata ebe ọ ga-anọ na ọnụ ọgụgụ nke ga-agwa gị bọmbụ ole ọ nwere gburugburu ya. 'MineX - Omuma Minesweeper' maka oS X, ọ dakọtara na retina ngosipụtanwere ọnụ ọgụgụ egwuregwu, ndu ndu Ebe Egwuregwu, na ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ.
Max nke egwuregwu:
Lelee egwuregwu egwuregwu, na ọsọ nke 0.25x ruo 4x.
Chekwaa egwuregwu gị.
Mbido: 9 × 9, mines 10.
N'etiti: 16 × 16, mines 40.
Ọkachamara: 30 × 16, mines 99.
Omenala: rue 70 × 40, mines 999.
El mbụ bya emee iphe dụ ẹji.
Pịa akaekpe maka mepee otu taịl.
Nri aka nri òké (ma ọ bụ Iwu (⌘) + pịa) maka akara a nke m.
Pịa bọtịnụ òké abụọ (o Iwu (⌘) + pịa) karịrị otu nọmba ngwa ngwa mepee taịl nile gbara ya gburugburu ma ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ ya na ọkọlọtọ ndị gbara ya gburugburu.
Emelitere: 09 / 10 / 2015
Onye Mmepụta: Tuan Truong.
Budata egwuregwu ahụ 'MineX - Ngwunye Minesweeper' kpamkpam n'efu maka obere oge, ozugbo Mac App Store na ịpị njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Mac App Store » Gwuo egwu egwu ndi ozo dika 'MineX' na Mac
Mee oku vidiyo na Mac gị n'ụzọ dị mfe yana ndị ọrụ asatọ
Egwuregwu Oceanhorn na-abịa na Mac App Store